Vavaky ny ady mba hahitana faminaniana tanteraka | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaky ny ady mba hahitana faminaniana tanteraka
Vavaky ny ady mba hahitana faminaniana tanteraka
1 Timoty 1:18 Izao didiko izao dia omeko anao, ry Timoty zanako, araka ny faminaniana efa nialoha anao, mba hiadianao ady tsara;
Ny tenin 'Andriamanitra dia voajanahary ara-paminaniana. Rehefa mandray sy mino ny tenin 'Andriamanitra ny olona dia manana fahefana hanatanteraka izay voalaza ao amin'ny fiainan'ny mino. Ny tenin 'Andriamanitra dia Fanahy, Jao 6:63, ny Fanahin' Andriamanitra no manome fiainana ny tenin 'Andriamanitra rehetra ao amin' ny Soratra Masina. Androany, hanao vavaka ady isika hahita ny fahatanterahan'ny faminaniana.
Hanokatra ny masonao amin'ny andraikinao ara-panahy ity lahatsoratra ity amin'ny fahitana fa tanteraka ny faminaniana. Mpino be dia be no mahazo faminaniana avy amin'ny Mpaminany iray na lehilahin'Andriamanitra, taorian'ny nahazoany ny faminaniana, momba ny olana, ny hatory, tsy manao na inona na inona momba izany. Mino izy ireo fa satria avy amin'Andriamanitra, dia hitranga eo ho eo izany. Matetika izy ireo no misafotofoto sy diso fanantenana. Androany, rehefa mamaky ity lahatsoratra ity isika dia hianatra ny fomba hampiharantsika ny finoantsika amin'ny alalan'ny vavaka fiadiana mba hahitana faminaniana tanteraka amin'ny fiainantsika.
Inona avy ny faminaniana?
Ny faminaniana ao anatin'izany toe-javatra izany dia ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fiainan'ny tsirairay na vondrona. Ny fanambarana ara-paminaniana rehetra dia tsy maintsy miorim-paka ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Midika fotsiny izany fa ny tenin'Andriamanitra dia tokotanin'ny fandrefesana ny maha-marina ny faminaniana na ny teny faminaniana. Ny faminaniana dia mazàn'ny lehilahin'Andriamanitra na ao amin'ny fivorian'ny fiangonana na mandritra ny fanompoana manokana.
Ireo lehilahy lehilahin'Andriamanitra ireo dia miteny sahy rehefa omen'ny Fanahy Masina azy ireo. Ny olona iray koa dia afaka mandray teny ara-paminaniana avy ao amin'ny soratra masina amin'ny antony fandalinana manokana. Antsoina hoe Rhema izany, rehefa miresaka aminao amin'ny alàlan'ny teniny Andriamanitra. Ohatra tsara amin'ny faminaniana any am-piasana ny tantaran'i Hana ao amin'ny 1 Samoela 1:17, faminaniana nataon'i Eli tamin'i Hana 'Mandehana soa aman-tsara dia homen'Andriamanitry Isreal ny fangatahanao.
Faminaniana dia fanambarana ny finoana, miorim-paka amin'ny tenin 'Andriamanitra, momba ny toe-javatra iainanao. Ny faminaniana rehetra mifototra amin'ny teny dia tsy maintsy manandratra ireo Fanahin'ny mpihaino, Andriamanitra dia tsy hamantatra ny zanany amin'ny faharavana sy ny fanamelohana, fa tsy amin'ny fanekena vaovao. Andeha hojerentsika ny karazana faminaniana roa.
Karazana faminaniana roa.
1. Mandrakizay: Ireo dia karazana faminaniana izay misy miresaka ny ho avy alohan'ny hitranga. Io fahasoavana io dia tsy omena ireo izay niantsoan'Andriamanitra ho ao amin'ny biraon'ny Mpaminany na faminaniana iray. Manambara ny drafitra ho avy amin'ireo mpaminaniny Andriamanitra amin'ny alalan'ny nofy, fahitana ary fahitana. Asehon'Andriamanitra amin'ny mpaminaniny ihany koa ny zavatra hitranga amin'ny hoavy lavitra, momba ny firenena na olon-tokana iray. Ohatra amin'ireo mpaminany ao amin'ny Baiboly dia: Isaia, Jeremia, Ezekiela, Daniela, Elia, Elisa ary Agabus.
Ity lehilahy ity dia naminany ho an'ny lehilahy ny amin'ny ho avy, ela talohan'ny nahatongavan'izany. Naminany momba an'i Jesôsy, Isaia 9: 6, Isaia 53: 5, Isaia 11:10, i Maminany Isaia momba ny medes sy ny fikomiana, ny Fitsarana Romanina Grika ary na i Aleksandra ilay lehibe, Daniel 7, naminany momba an'i Agabus. fisamborana an'i Paoly tao Jerosalema talohan'ny nahatongavan'izany, Asa. 21: 10-11.
Ny faminaniana mialoha hanambara ny ho avy dia fahasoavana omena ireo mpaminany antsoina ihany.
Matio 17:20 Ary hoy Jesosy taminy: Noho ny tsy finoanareo; fa lazaiko aminareo marina tokoa: Raha manam-pinoana toy ny voan-tsinapy ianao dia milazà amin'ity tendrombohitra ity hoe: Mifindrà at hence ho any amin'ny fitoerana hafa; ary hesorina izy; ary tsy misy tsy hainonao.
Ity dia karazana faminaniana iray izay mitaky ny fahasambarana feno ny tenin'Andrimanitra momba ny toe-javatra iainanao. raha ny mpaminany aloha dia voafetra ho an'ny mpaminany ihany, ny mpino rehetra dia afaka miasa amin'ny fahasoavana amin'ny fitenenana. Ny filazana mandrakizay dia asan'ny fahitana raha toa ka milaza ny hafa ny asan'ny Fanahin'ny Finoana, 2 Korintiana 4:13. Ny tenin 'Andriamanitra izay inoanao sy hiresaka amin'ny fiainanao dia manana ny fahafaha-mamokatra araka ny finoanao. Isaky ny manambara ny faminaniana ao amin'ny fiainanao ny lehilahin'Andrimanitra, dia manao faminaniana maminany izy ireo, isaky ny manambara ny tenin'ny finoana amin'ny fiainanao ianao, dia manao io karazana faminaniana io eo amin'ny fiainanao.
Maninona no tsy maintsy mivavaka mba hahitako faminaniana tanteraka
Eny, tsy maintsy mivavaka ianao mahita ny fahatanterahan'ny faminaniana. Ny Hebreo 11: 6, dia milaza amintsika fa raha tsy manam-pinoana dia tsy azo atao ny mampifaly an'Andriamanitra. Midika izany fa mitaky finoana antsika hisintona amin'Andriamanitra ary hampitomboina kokoa ny teny avy amin'Andriamanitra. Rehefa mivoaka avy ao amin'Andriamanitra na ny teniny ny teny faminaniana, dia efa mipetraka any an-danitra, ao amin'ny fanjakan'ny fanahy. Raha hitanao fa hitranga amin'ny fiainanao izany, tokony hampiasa ny finoanao ianao amin'ny alalan'ny ady mpiady. Misy hery maro eo amin'ny fiainana izay hiady amin'ny lovanao ao amin'i Kristy, izany no antony tsy maintsy iatrehanao, mila ampiasanao ny adin'ny Finoana mba hahazoana ilay fanananao. Jereo ireo ohatra vitsivitsy ao amin'ny Baiboly:
i. Deoteronomia 2:24: Andriamanitra dia nilaza tamin'ny zanak'Atra izay nomen'izy ireo ny tanin'ireo firenena hafa rehetra manodidina, fa mbola nandroso hatrany Izy mba hamporisika azy ireo hiady amin'ireo firenena ireo amin'ny ady (Ady) mba hanana ny taniny. Zavatra iray ny mandray zavatra, zavatra hafa ny hampakatra azy. Ny andraikitra dia misy ady.
II. 1 Timoty 1:18: Ny Apôstôly Paoly ao amin'io soratra masina io dia nanentana ny zanany lahy Timoty hanao ady ara-panahy hahitana ireo teny ara-paminaniana voalaza momba azy. Nahatakatra i Paoly fa ny faminaniana tsy tanteraka amin'ny fiainan'ireo kristiana kamo fatratra. Raha te hahita ny tenin'Andrimanitra miasa ho anao ianao dia tsy maintsy miasa amin'ny finoana.
III. Genesisy 15: 14-15: Naminany tamin'i Abrahama Andriamanitra, fa ny taranany dia ho babo mandritra ny 400 taona aorian'izay hanafaka azy ireo amin'ny fahababoana. Ankehitriny, izany faminaniana izany dia tonga taonjato maro taty aoriana. Lasa babo tany Ejipta i Isreal nandritra ny 400 taona, saingy tamin'io fotoana io, tsy nisy olona nanao na inona na inona mba hahatanteraka ny faminaniana, ka dia nitohy hatrany ny fahababoana hatramin'ny 30 taona taty aoriana, rehefa nanomboka nitalaho tamin'ny Tompo ny Isiraita mba hahazoany fahalalahana ary Andriamanitra dia nandefa mosa. Ny 30 taona farany izay dia satria tsy nisy olona nandray andraikitra ara-panahy hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra.
IV. Daniela 9: 2-27: Hitan'i Daniela tamin'ny alàlan'ny bokin'i Jeremia mpaminany fa tokony ho babo tany Babylon izy ireo nandritra ny 70 taona fotsiny, saingy efa lasa ny 70 taona ary mbola natao babo ihany izy ireo, tsy nisy na inona na inona nitranga. Nandohalika i Daniel nanomboka nanomboka nivavaka ho an'ny fahalalahan'ny fireneny ary Andriamanitra nitsidika azy.
v. Lioka 24:49: Nampanantena ny mpianany i Jesoa Kristy fa ho tapitra amin'ny herin'ny Fanahy Masina izy ireo, fa tokony hijanona ao Jerosalema izy ireo raha tsy avy any an-danitra ny hery. Izy ireo dia tsy nandray ny fampanantenan’I Jesosy fotsiny ary nandeha hilalao na trondro tao Jerosalema, hoy ny baiboly fa niara-nivavaka sy niandry ny Tompo hanatanteraka ny teniny izy ireo. Tanteraka ny tenin’Andriamanitra.Asa. 2: 1-3.
Ireo tranga rehetra ireo dia manondro ny fahamarinana avokoa, ny faminaniana dia tsy mahatanteraka ny tenany, miditra amin'ny finoana ady feno ady fotsiny ianao hahitanao ny fahatanterahan'ny faminaniana. Tokony hitsangana ianao ka hanana izay rehetra natolotr'Andriamanitra ho anao ao amin'i Kristy Jesosy.
Tena zava-dehibe izany satria maro ny mpanohitra demonia amin'ny fiainana. Raha mandeha matory ianao rehefa avy mandray ny tenin'andriamanitra ara-paminaniana, dia ho avy ny devoly ary hamafy tsimoka izay hamono ny voan'ny teny faminaniana eo amin'ny fiainanao. Raha te hahita faminaniana momba ny fiainanao dia tsy maintsy miady ianao, tsy maintsy miady ny ady tsara amin'ny finoana ianao, tsy maintsy miady amin'ny ady ara-panahy ianao handringana ny hery manohitra izay manandrana hijoro eo aminao sy ny faminanian'Andriamanitra momba ny fiainanao.
Mba hahalalantsika ireo karazana karazam-bavaka tokony hivavahana, dia andeha hojerentsika haingana ny vavaka 3 karazana. Nanoratra momba ny karazana vavaka azonao vakiana Eto. Fa raha ny lohahevitra androany, andao hodinihintsika ireto telo ireto:
1. fifonana: Io dia iray amin'ny vavaka tokana eo aminareo sy Andriamanitra. Ny fifonana no entinao amin'ny Tompo amin'ny filanao manokana. Ity vavaka ity dia mifantoka amin'ny olanao manokana.
2. Fanelanelanana: Mivavaka ho an'ny olona iray na vondron'olona. Ny fandalovana dia endri-bavaka mahery vaika, matanjaka noho ny toetrany tsy misy fitiavan-tena. Rehefa mandeha mivavaka ho an'ny hafa ianao dia Andriamanitra mihitsy no mikarakara izay ilainao.
3. Vavaky ny ifotony Karazana vavaka mahery vaika io. Ireo no karazana vavaka ivavahanao rehefa mifanatrika ny tendrombohitrao ianao. Ny vavaka ifantohana dia vavaka amin'ny ady ary noho izany dia izy no vavaka mety indrindra hivavaka rehefa te hahita faminaniana tanteraka amin'ny fiainanao ianao. Isaky ny misy teny faminaniana avoaka eo amin'ny làlanao, dia manaova vavaka mifanatrika mba hialana amin'ilay zavatra nolazain'Andriamanitra momba ny fiainanao sy ny hoavinao. Rehefa mandray anjara amin'ny karazam-bavan'ny ady ianao dia manapotika ny hery fanoherana rehetra manandrana mampiato ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao.
Nifidy vavaka mahery mahery aho mba hahitako faminaniana tanteraka amin'ny fiainanao. Ireo vavaka ireo dia vavaka fifanoherana rehefa mifanatrika ny hery manery anao izy ireo. ampio izy ireo amin'ny finoana ankehitriny ary ny teny faminaniana rehetra voalaza amin'ny fiainanao dia ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Vavaky ny ady
1. Ray ô, misaotra anao noho ny hatsaranao aho tamin'ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy
2. Ry Tompon'ny famindrampo, mamindrà fo amiko ary diovy aho amin'ny tsy fahamarinana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
3. Miantso ny teny faminaniana rehetra nolazaiko teo amin'ny fiainako Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
4. Tsy misy tenin'olombelona nolazaina momba ny fiainako ho latsaka amin'ny tany indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
5. Manohitra ny hery rehetra manohitra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako aho ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
6. Nofoanako ny ady rehetra misy ny demonia amin'ny ady amin'ny teny ara-paminaniana eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
7. Izaho dia mampangina ny feo ratsy rehetra miteny tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
8. Naringako ny printsin'ny persia rehetra miady amin'ny fandefasana ny fonosako ara-paminaniana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
9. Ny feon'ny tsy finoana rehetra miady ny ran'Andriamanitra amin'ny fiainako dia mangina anao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
10. Izaho dia mamotika ny fitazomana ny herin'ny faritany izay miady amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
11. Nambarako fa hijoro ho vavolombelona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra aho amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
12. Handresy ny ady rehetra aho amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
13. Hofoanako ny fetra rehetra mitazona ny fatorako amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
14. Izaho handresy ny nofinofisiko indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
15. Ny fahombiazana dia lova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
16. Ny voankazo dia lova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
17. Ny devoly dia very ny ady tamin'ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy
18. Ny fahavaloko rehetra dia voaroaka mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
19. Izay mitady ny fahoriako dia hohamenatra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
20. Ny teny hoe Andriamanitra dia tsy ho diso mandrakizay amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
Misaotra Jesosy Kristy nitondra ny teninao tamin'ny fiainako.
Previous lahatsoratraVavaky ny ady mba handrava ny herin'ny fanahy mahery setra
Next lahatsoratraMihaino ny vavaka ataontsika ve Andriamanitra?
Mary 21 Janoary 2020 Amin'ny 12:12 hariva
Misaotra anao Pastor ny vavaka rehetra mendrika hivavaka amin'ity bilaogy ity. Misaotra anao nanokatra ny masoko tamin'ireo fanazavana rehetra azoko isaky ny vavaka.
Chris Jiona 22, 2020 Ao amin'ny 8: 56 am
Hotahin'Andriamanitra anao ny Mpitandrina ity fahefana mahery ity. !
Derrick 19 Janoary 2021 Amin'ny 5:54 hariva
Misaotra pastera, nitahy ahy tokoa ianao tamin'ny teninao. Fahasoavana bebe kokoa amin'ny fiainanao
Davis 26 jona 2021 Amin'ny 11:47 hariva
Nahazo fahalalana sy fahazavana aho
Laeticia Ndjouhou 28 Jolay 2021 Amin'ny 3:09 maraina
Seigneur, j implore ton pardon papa stp, je sais que je ne un pécheur, je te demande pardon pour le mal que j ai fait, j ai menti, j ai volé, j ai triché.viens à moi papa je me sens vide et sans espoir… j ai le sentiment d avoir été abandonnée, rejeté… j dia manatrika ny fifanarahana sy ny mavie.toi ary ny savons any an-toerana dia miampy profond de mon cœur
Teboka vavaka hanatsarana ny fiainam-bavakao
Vavaka Holazaina alohan'ny fiombonan'ny Masina
FIVAVAKANA HO AN'NY LESOTHO.
Fanafahana avy amin'ny hevi-bavaka amin'ny fahantrana
Janoary 14, 2019